३ करोडको लगानीमा 'एकता सर्जिकल कन्सर्न प्रा. लि' सञ्चालनमा - Parichaya.com
३ करोडको लगानीमा ‘एकता सर्जिकल कन्सर्न प्रा. लि’ सञ्चालनमा
By परिचय	 On २५ आश्विन २०७८, सोमबार १४:२२ 0
पोखरा महानगरपालिका वडा न. १०, स्थित हस्पिटल चोकमा ‘एकता सर्जिकल कन्सर्न प्रा. लि’ सञ्चालनमा आएको छ।
नया अबधारणा अनुसार ल्याब अर्थात विभिन्न प्रयोगशालामा आबद्ध करिव ४२ जनाको टिमले पछिल्लो समयमा देखिएको समस्यलाई समाधान गर्ने हेतुले सर्जिकल सञ्चालनमा ल्याएको एकता सर्जिकलका अध्यक्ष महेन्द्र के. शीले जानकारी दिए।
सर्जिकल ल्याबमा स्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, हस्पिटल, स्कुल, कलेजका ल्याबहरुमा आवश्यक पर्ने सामान उपलब्ध गराउने सर्जिकलका उपाध्यक्ष अनुपम विभाषले बताए।
यस्तै सर्जिकलमा केमिकल, उपकरण, सर्जिकल सामान र बिज्ञान सम्बन्धी सम्पुर्ण सामाग्रीहरु पनि पाइने उपाध्यक्ष विभाषले जानकारी दिए । सर्जिकलमा सबै ल्याब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक उपकरणहरु समानुपातिक रुमपा एउटै मुल्यमा प्रदान गरिने उपाध्यक्ष विभाषले जानकारी गराए।
करिव ३ करोड रुपैयामा सञ्चालित सर्जिकलमा ल्याब सम्बन्धि स्वास्थ्य सामग्रीमा गुणस्तरलाई ध्यान दिदै आफुहरुले लगानी गरेको र सञ्चालनमा ल्याएको सर्जिकलका सल्लाहकार अर्जुन ज्ञवालीले बताए । सर्जिकलले गण्डकी प्रदेश संगै सिंगो पोखरालाई एकरुपतामा सेवा प्रदान गर्ने ज्ञवालीले बताए।